माधव नेपाललाई किन बोलाइएन बालुवाटार ? ~ नेपाली समाचार | Latest News from Kathmandu, Nepal
माधव नेपाललाई किन बोलाइएन बालुवाटार ?
काठमाडौं । नेकपा बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल श्रीलंका भ्रमणमा जानुअघि पुरानालाई नै जिल्ला इन्चार्ज बनाउने मौखिक सहमति बन्यो । श्रीलंका फर्केपछि तीन शीर्ष नेता बसेर पार्टी एकताका सवै काम टुंग्याउने बालुवाटारमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपालबीच सहमति भएको थियो ।
तर नेपाललाई बालुवाटारमा नबोलाई दुई अध्यक्षले नेकपा एकताको काम पूर्णरुपमा टुंग्याएका छन् । दुई अध्यक्ष, महासचिव बिष्णु पौडेल र सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा पार्टी एकताका सवै काम टुंग्याउने छलफल गरिरहेका बेला नेपाल काठमाडौंमै थिए । तर अध्यक्ष ओलीले नेपाललाई बालुवाटारमा बोलाएनन् । नेपाल विना नै जिल्ला इन्चार्ज, सहइन्चार्ज र विभाग प्रमुखको टुंग्याएका छन् । के मापदण्डमा जिल्ला इन्चार्जदेखि विभाग प्रमुख टुंग्याइयो त्यसको जानकारी नेपालले पाएका छैनन् ।
५ साउन दिउँसो १ बजे नेकपा सचिवालय बैठक डाकिएको छ । बैठकभन्दा अघि नेपालसँग कुनैपनि अनौपचारिक छलफल नभएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । नेपालसँग दाहालको टेलिफोन सम्वाद भएपनि ओलीसँग भने कुनै सम्वाद भएको छैन । नेपाललाई विदेश विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिने बालुवाटारमा सहमति भएको छ । त्यही कुरा जानकारी गराउन दाहालले नेपाललाई टेलिफोन गरेका थिए ।
नेपालमात्र नभएर सचिवालयका अन्य सदस्यहरु झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठसँग पनि कुनै छलफल गरिएको छैन । ती नेताहरुसँग सचिवालय बैठकमै छलफल गर्नेगरी अध्यक्ष ओलीले तयारी गरेका छन् ।